Qormada Iibinta ee Soomaaliya
Qormadaada shaqsiyeed ee iibka ah adigoon bixin lacag qarsoon. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Qormada Kuleejka ee Iibinta - Halkee Laga Helaa Qormo Qorid Rakhiis ah
Haddii aad jeceshahay qorista, ku iibinta qormooyinka lacag caddaan ah waxay noqon kartaa hab xiiso leh oo lagu kasbado xoogaa lacag dheeraad ah. Waxaa jira qaabab badan oo lagula tacaali karo ganacsigan. Waad iibin kartaa qoraaladaada sida shaqooyinka qorista shaqsiyeed. Waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad ku iibsato qormooyinka iibka ah adoo u maraya wakaalad ama wakiil suugaaneed. Waxa kale oo jira qaabab badan oo lagu dhiirrigeliyo qormada aad ku qortay iibka.
Hab kasta oo aad doorato, waa muhiim inaad siiso adeeg macmiil wanaagsan markaad ku iibinayso qormooyinkaaga jaban qadka. Haddii dadku aysan fahmin sababta aad u iibineyso qoraalladooda, ma lahaan doontid taageerayaal badan. Qor qormooyin raqiis ah oo iib ah iskuday kasta oo lagu abuurayo khibrad adeeg macmiil oo dhab ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto daacadnimo soo socota oo si xamaasad leh u rajeyn doonta bixintaada soo socota.
Qor qoraalada kulleejada iibka adoo adeegsanaya qoraalada aad uqortay shaqsi ahaan ama iskuulka. Markaad wax uqorto adeegsiga shakhsi ahaaneed, waxaad galin kartaa macluumaad shaqsiyeed inta aad rabto. Si kastaba ha noqotee, markaad wax u qoreyso dugsiga, waxaa fiican inaad ku ekaato guud ahaan, naxwe ahaan u sax isticmaalka. Taas macnaheedu maahan inaad u baahan tahay inaad iska indhatirto xarakaynta iyo naxwaha! Laakiin waxaad u baahan tahay inaad xusuusato in ujeeddadaadu tahay inaad naxwe ahaan sax ahaato, sidaa darteed had iyo jeer dib-u-akhri oo u saxo khaladaadka. Sidoo kale, ku dheji macluumaad kasta oo khaas ah ama shakhsi ahaaneed foomka dalabka si ay macaamiishaadu had iyo jeer kula soo xiriiraan haddii ay wax su'aalo ama walaac ah qabaan.
Qorayaasha qoraalka tacliinta waa inay taxaddar gaar ah yeeshaan markay daabacayaan qoraalladooda iibka khadka tooska ah. Inta badan madbacadaha dhaqameedku waxay daabacaan oo keliya qorista tacliinta ee dib loo eegay. Waraaqaha noocan ah waxay maraan dib u eegis adag oo asaagooda ah si loo hubiyo inay yihiin tayo la aqbali karo. Dhaleeceeyayaal xirfadlayaal ah iyo khabiiro ayaa akhriya waraaqaha kahor intaan la daabicin si ay u tilmaamaan meelaha dhibku ka jiro.
Tani macnaheedu maaha in qoraaladaada iibka oo dhan lagu hoos geyn doono heerar isku mid ah. Waad diidi kartaa qormo, laakiin waxaa loo calaamadin doonaa sida oo kale waxaana looga hadli doonaa si faahfaahsan buugga daabacaha. Inta badan daabacayaasha dhaqameedku waxay adeegsanayeen habkan muddo dheer, qorayaasha badidooduna waxay fahmayaan sida howshani u shaqeyso. Xaqiiqdii, dhaleeceyn badan oo xirfadlayaal ah iyo tifaftireyaal ayaa diyaar u ah inay ka dhiibtaan ra'yigooda ku saabsan tayada noocyada kala duwan ee qoraalada iibka khadka tooska ah.
Haddii aad ka iibiso qoraaladaada kulleejo, waa in lagu qoraa iyadoo la adeegsanayo barnaamijka ugu tayada fiican ee aad awoodi karto. Ardaydu way qori karaan qoraalada ugu tayada fiican dugsiga iyaga oo adeegsanaya qalabka ereyada sida Microsoft Word ama Apple iWork Pages. Waxaad sidoo kale daabacan kartaa nuqulada qoraaladaada si aad u iibiso ka dibna aad uqorto nuqulkaaga oo aad ugu dirto madbacad. Haddii barnaamijkaagu ka qiimo hooseeyo kan daabacahaaga, weli waad keydin doontaa lacag oo shaqadaada ayaa loo daabici doonaa si tayo dhab ah.
Qaar ka mid ah bixiyeyaasha adeegga ayaa diyaar u ah inay dib u akhriyaan qoraaladaada qorniinka ah lacag. Tan macnaheedu waa inay ka hubiyaan dukumintiyadaada qaladaad naxwe ahaan, xarakayn, dhisida jumlada, iyo cillado kale. Adeegbixiyaha ayaa kugula talin kara noocyada wanaagsan ee qormooyinkaaga iibka ah sidoo kale waxay ku siin karaan jawaab celin ku saabsan shaqadaada si ay kaaga caawiyaan inaad horumariso. Waxa kale oo jira iibiyeyaal maqaal ah oo dib u akhriyi doona oo wax ka beddeli doona qoraaladaada kahor intaanay kuu soo daabicin.
Ku iibinta qoraalada kulleejkaaga lacag caddaan ah ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loogu isticmaalo waraaqahaaga dheeriga ah. Haddii aad haysato waraaqo aad u tiro badan oo aanad haysan lacag kugu filan, waxaad u isticmaali kartaa waraaqahaas dheeriga ah in aad ku kabto dakhligaaga. Uma baahnid inaad ka walwasho khidmadaha waxbaridda ama amaahda fasalka markaad haysato waraaqo dheeri ah oo sugaya inaad isticmaasho. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad iibiso kaliya nooca warbixinta buugga ee waraaqahaaga, taas oo waqti iyo boostaba u reebaysa adiga iyo macaamilka labadaba. Wax kasta oo aad sameyso, badbaadi waqti iyo lacag ku iibinta qoraaladaada kulleejada aad isticmaashay kuwa khibrada u leh iibiyeyaasha maqaalka.